Ra’iisul Wasaare Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay magaalada Garowe – idalenews.com
Ra’iisul Wasaare Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay magaalada Garowe
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Garowe ee Gobolka Nugaal, iyadoo safarkan uu yahay kii u horeeyay, kaasoo qeyb ka ah, safaro uu mudooyinkii u dambeeyay uu ku tagayay Gobolada dalka.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa Labo diyaaradood ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, waxaana qeyb ka ah xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Xildhibaano.
Wararka laga helayo Garowe ayaa sheegaya in ammaanka aad loo adkeeyay, iyadoo ay socdaan qaban qaabo lagu soo dhoweynayo Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha.
Booqashada Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ee Puntland ayaa noqoneysa mid qeyb ka ah dadaaladada dowladda Soomaaliya ugu jirto sidii gobolada dalka u gaarsiin laheyd nidaamka federaalka, iyadoo Puntland uu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka jira.
Dhinaca kale Maamulka Puntland ayaa dhowaan si aad ah uga soo horjeestay cunoqabateynta Hubka ee saaran Soomaaliya, waxaana la saadaalinayay in socdaalka Ra’iisul Wasaare Saacid inuu qeyb ka yahay.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa todobaadkii hore booqasho qaadatay saddex cisho ku tagay Gobolada Dhexe, iyadoo uu booqday Dhuusa Mareeb, Cadaado iyo Caabudwaaq, halkaasoo uu wada hadalo kula soo yeeshay maamulada ka jira halkaas.
Munaasabad lagu xusayay Maalinta Haweenka 8-da Maarso oo ka dhacday degmada Marko (Sawirro)
Haweeney Soomaliyed oo ka mid noqotay 9-haween oo Mareykanka Abaal marin gudoonsiisay (Daawo-Sawirro)